ငါ (ရောဘတ်ဂျွန်ဆင်) ထွက်လမ်းလျှောက်အဖြစ် - oboe, Clarinet, bassoons, စန္ဒရား - ဒါဝိဒ်သည် Warin ရှောလမုန်သည် '' ဂီတ Catalog
ပင်မစာမျက်နှာ / ကရိယာတန်းဆာပလာနှင့်ဆိုင်သော / Woodwind / လေတိုက်Trió Quintet Sextets နှင့် Nonets / လေတိုက်Trió / လေတိုက်Trió / ငါ (ရောဘတ်ဂျွန်ဆင်) ထွက်လမ်းလျှောက်အဖြစ် - oboe, Clarinet, bassoons, စန်ဒရား
ငါ (ရောဘတ်ဂျွန်ဆင်) ထွက်လမ်းလျှောက်အဖြစ် - oboe, Clarinet, bassoons, စန်ဒရား
Categories: bassoons, Clarinet, oboe, လေတိုက်Trió
အဆိုပါ Meadows အစိမ်းရောင်နှင့်လိင်တူချစ်သူကြည့်ရှုရန်
ငါ espied တစ်ဦးကသာယာသော Bower
ထိုအခါသမီးကညာကို in't ငါအော်ဟစ်သောအသံကိုကြား
အို! alas! အဘယ်သူမျှမ e'er ဗြဲကဲ့သို့ရှိကိုခစျြရဲ့
အဆိုပါမြက်ခင်းထဲမှာရှိသကဲ့သို့ထိုသို့သော flow'rs ကြီးပြင်း,
လူသေက Man ရဲ့လက်မ, အပြာတစ်ခုပျိုးပင်အပေါင်းတို့,
သူမကသူတို့ကို pull'd အဖြစ်နှင့်နေဆဲသူမကြွေးကြော်
သူမသည် knotty ကွေးနဲ့အတူအကြောင်းကိုခညျြနှောငျ;
သူမသည်ငိုကွှေးလကျြသူမ sigh'd သူမကသူမ၏လက်အားညှစ်;
အို! alas! alas! သူမအော်ဟစ်
သူမအပြည့်အဝသူမ၏ခါးစညျးရှေ့ဖုံး fill'd ပြီးမှ
သူမ cull နိုင်ကဲ့သို့သောအစိမ်းရောင်အရာ,
အဆိုပါ flow'rs သူမ၏ဦးခေါင်းများအတွက်ခေါင်းအုံးကြ၏
သူမကသူမ၏ထားကြ၏ချထို့နောက် ne'er ပိုပြီးမပြောတတ် ပြု. ,
အို! alas! ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်အတူသူမ၏နှလုံးကိုချိုးဖျက်ခဲ့တယျ။
ပုလွေများနှင့် oboe အဘို့ကျောက်ကာရယ်လ် (Little ကယရှေု, မြိန်စွာအိပ်စက်ခြင်း)
2 oboes များအတွက် Es es es und es အပေါ်ရိုးရှင်းသော canon
ပုလွေများနှင့် oboe အဘို့အကောင်းကဘုရငျ Wenceslas (Tempus adest floridum) ရက်နေ့တွင်အပြောင်းအလဲတွေဟာ Folksong ရိုက်ချက် - oboe နှင့်စန္ဒရား
einen Harung (ထို herring သီချင်း) တွင် - string ကို quartet
ကြေးဝါကဲ့သို့၎င်း ensembles (77)
လေတိုက်Trió Quintet Sextets နှင့် Nonets (366)
လေတိုက်ကို quartets (133)
saxophone ကို quartets များအတွက်အစီအစဉ်များ (90)
Clarinet ကို quartets (172)
Clarinet ဆိုပြီး (63)
Flute မှ Quartet (153)
အသံဖမ်း Quartet (50)
string ကို quartets (136)
keyboard ကိုတူရိယာ (256)
bassoons နှင့်ဂစ်တာ (104)
ဂစ်တာနဲ့ cello (117)
ဂစ်တာနဲ့ Recorder (94)
ကော anglais နှင့်ဂစ်တာဘို့ဆိုပြီး (128)
Viola နှငျ့ဂစ်တာ (102)
ဂစ်တာနဲ့ oboe (42)
ဂစ်တာနဲ့ Flute မှ (320)
ဂစ်တာနဲ့ Clarinet (245)
အသံနှင့် Choral အလုပ်လုပ် (608)
la Folia အပြောင်းအလဲတွေဟာ (20)
Choral အလုပ်လုပ် (108)
Choral အလုပ်လုပ် - အမျိုးသားများရဲ့အသံတွေကို - ဝိညာဏ (14)
ရောနှော Choir လောက (34)
သင်ကြည့်ပါတယ်: ငါ (ရောဘတ်ဂျွန်ဆင်) ထွက်လမ်းလျှောက်အဖြစ် - oboe, Clarinet, bassoons, စန်ဒရား